လမ်းညွန်မှု။ | WeXpats Forum
WeXpats Forum လမ်းညွှန်ချက်
သင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏နေ့စဥ်ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွင် အဆင်မပြေဘူးဟု တွေးထင်မိသောကြောင်းအရာနှင့် သိလိုသောအကြောင်းအရာ၊ လက်တွေ့နေထိုင်ကြသည့်အခါမှာအဆင်မပြေသောအကြောင်းအရာများကိုမေးခွန်းထုတ်ကြည့်ရအောင်။ သင်၏အဆင်မပြေမှုများ၊ စိတ်ညစ်စရာများကိုဖြေရှင်းခဲ့သောအတွေ့အကြုံများအား မျှဝေပေးကြရအောင်။
1.ပြင်ချင်သော မေးခွန်း၏ ညာဘက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော「…」ကိုနှိပ်ပါ။
※မေးခွန်းအား အဖြေများဖြေဆိုထားပြီးပါက၊ ထိုမေးခွန်းကိုပြန်ဖျက်၍မရနိုင်သော်လည်း ထိုမေးခွန်းကိုထပ်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
1.မေးခွန်းဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်မေးခွန်း၏ ညာဘက်အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော「…」ကိုနှိပ်ပါ။
※ရှိပြီးသားမေးခွန်းတွင် အဖြေဖြေပြီးသွားပါက ပြန်ဖျက်၍မရနိုင်ပါ။
・စာသားတွင် သင်ရေးသားထားချင်သောအကြောင်းအရာ ၊သိလိုသောအချက်အလက်ကို အသေးစိတ်ဖြည့်ပေးပါ။
・တစ်စုံတစ်ယောက်ကကြည့်သောအခါ နားလည်လွယ်ပြီး ဖတ်ရလွယ်သောစာကြောင်းဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးပါ။
. ထိုသို့ရေးသားထားသော်လည်း အဖြေဖြေဆိုမည့်သူမရှိပါက၊ ဖြေဆိုပေးရန်တောင်းဆိုခြင်း ကိုအသုံးပြုကြရအောင်။
ဖြေဆိုပေးရန်တောင်းဆိုမည် ဆိုသည်မှာ မိမိမေးထားသောမေးခွန်းသာမက အခြားသူများမေးထားသောမေးခွန်းများကိုလည်း Wexpats Forum အဖွဲ့ဝင်များအား ဖြေဆိုပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သောအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။
3.အဖြေဖြေဆိုပေးရန်တောင်းဆိုချင်သည့် အဖွဲ့ဝင်၏ စစ်ဆေးရန်နေရာကိုနှိပ်ပါ။
※မေြးခွန်းတစ်ခုတွင် လူ ၅ ယောက်အထိ ဖြေဆိုပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
7. ဖြေဆိုပေးရန်တောင်းဆိုခံရပါက မဖြစ်မနေဖြေဆိုရမည်လား။
ဖြေဆိုပေးရန်တောင်းဆိုခံရပါက၊အဖြေကိုမဖြေ၍လည်းရပါတယ်။အကယ်၍ မိမိကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတများရှိပါက အဖြေဖြေဆိုခြင်းဖြင့် အဖွဲ့သားအချင်းချင်းကူညီကြရအောင်။
မိမိသည် WeXpats Forum မှတဆင့် မေးခွန်းများမေးမြန်းကို၊ အခြားသောသူများမသိစေချင်သောအခါ အမည်မဖော်ပြပဲမေးမြန်းခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အမည်မဖော်ပြပဲမေးမြန်းခြင်း အမှတ်အသားကိုအသုံးပြုပါက၊ အခြားသောအဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုမေးခွန်းကိုမေးသောသူအား မသိနိုင်ပါ။ သို့သော် WeXpats Forum တွင် အမည်မှန်ဖြင့်သာ မေးမြန်းစေလိုပါတယ်။ WeXpats Forum ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုမည့်အခြားအဖွဲ့ဝင်များသည် မေးခွန်းမေးသူ၏ ပရိုဖိုင်အားကြည့်ရှုပြီးမှ အဖြေများဖြေဆိုရန်စဥ်းစားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မေးခွန်းမေးမြန်းသူ၏ ပရိုဖိုင်အားမသိရှိပါက ဖြေဆိုပေးရန် ခက်ခဲသောကြောင့်၊ သင်အမှန်တကယ်သိလိုသော အကြောင်းအရာများအတွက် အဖြေမှန်မရရှိနိုင်ပါ။ ထိုအဖြစ်များမဖြစ်စေရန်အတွက် WeXpats Forum တွင် အမည်မှန်ဖြင့်သာ မေးမြန်းစေလိုပါတယ်။
「Bookmark」ဆိုသည်မှာ နှစ်သက်သဘောကျသောမေးခွန်းအား သိမ်းထားနိုင်သောအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းတွင် 「Bookmark」ပြုလုပ်ထားပါက၊ ထိုမေးခွန်း၏အဖြေရောက်ရှိလာပါက၊ အကြောင်းကြားပေးပါမယ်။ ထို့အပြင်၊ မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာတွင် သင်「Bookmark」ပြုလုပ်ထားသောမေးခွန်းစာရင်းတွင် ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
1.နှစ်သက်သဘောကျသောမေးခွန်းများအားဘယ်ဘက်အောက်ရှိ ဖော်ပြထားသော အမှတ်အသား「 」ကိုနှိပ်ပါ။
2.အမှတ်အသားအားပြန်ဖျက်ပစ်ချင်သောအချိန်တွင် နောက်တစ်ကြိမ် 「 」ကိုနှိပ်ပါ။
အဖြေတွင်「Useful」ပြုလုပ်ထားပါက၊ မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာတွင် သင်「Useful」しပြုလုပ်ထားသောအဖြေစာရင်းတွင် ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
1.အဖြေအားဘယ်ဘက်အောက်ရှိ ဖော်ပြထားသော အမှတ်အသား「 」ကိုနှိပ်ပါ။
2.အမှတ်အသားအားပြန်ဖျက်ပစ်ချင်သောအချိန်တွင် နောက်တစ်ကြိမ်「 」ကိုနှိပ်ပါ။
အဖွဲ့ဝင်များထံမှ မေးခွန်းများတွေ့ရှိပါက၊ သင်ကြုံတွေ့ရခဲ့သော အတွေ့အကြုံများအား ပြန်လည်စဥ်းစားပြီး ဖြေဆိုပေးကြရအောင်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီ၏ အမြင်များသည် WeXpats Forum အဖွဲ့ဝင်များအား အကူအညီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
1.ဖြေဆိုချင်သော မေးခွန်း၏ ညာဘက်အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော「အဖြေ」ကိုနှိပ်ပါ။
2 စာသားများရေးသားပြီးပါက 「အတည်ပြုမည်」ကိုနှိပ်ပါ။
အဖြေများကို အဖြေမျက်နှာပြင်မှတဆင့် ပြန်ပြင်နိုင်ပါတယ်။
1.ပြန်ပြင်ချင်သောအဖြေ၏ညာဘက်အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော「 」ကိုနှိပ်ပါ။
3.ပြန်ပြင်ချင်သောအကြောင်းအရာများကို ဖြည့်စွက်ပြီးပါက 「အတည်ပြုမည်」ကိုနှိပ်ပါ။
ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာအား စိတ်ပါဝင်စားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်၏အဖြေများကိုပိုမိုယုံကြည်လာနိုင်ပြီး၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးများရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာကို အသေးစိတ်ဖြည့်စွက်ကြရအောင်။
သင့်ကိုယ်ပိုင် ဘလော့နှင့် SNS အကောင့်များဖြည့်စွက်ပါ။
・သင်လက်ရှိနေထိုင်သောတိုင်းပြည်ကိုရွေးချယ်ပြီး၊ ထိုတိုင်းပြည်တွင်စတင်နေထိုင်သောနှစ်/လ ကိုရွေးချယ်ပါ။
※သင်လက်ရှိနေထိုင်သောတိုင်းပြည်မှထွက်ခွာမည့် နှစ်/လ ကို အလိုအလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါမယ်။
15. WeXpats Forum ကိုအသုံးပြုပြီးရင်သတိပြုရမယ့်အချက်ရှိပါသလား။
WeXpats Forum ကိုအသုံးပြုနေသောအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးသည် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများဖြစ်ပါတယ်။「မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်က အကူအညီတောင်းလျှင် အချင်းချင်းကူညီပေးရပါမယ်။ 」ဆိုတဲ့ ကတိစကားကို လိုက်နာပြီး WeXpats Forum ကို အသုံးပြုရပါမယ်။
ဒါ့အပြင် WeXpats တွင် အောက်ပါအပြုအမူများအား တားမြစ်ထားပါတယ်။
အကယ်၍ လမ်းညွှန်ချက်နှင့် အသုံးပြုရာတွင်လိုက်နာရမည့်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်သောအပြုအမူများတွေ့ရှိပါက၊ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်နေရာမှတဆင့် အကြောင်းကြားပါမည်။ အသုံးပြုရာတွင်လိုက်နာရမည့်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ပါက မေးခွန်းများကို ဖျက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့်အားကန့်သတ်ခြင်း အပါအဝင် အသုံးပြုခွင့်မပြုတော့ပဲ အကောင့်အား ဖျက်ပစ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ပါမည်။